सवारीको इम्बोस्ड प्लेटमा प्रदेशको नाम
सोमबारबाट आवेदन खुल्ला
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । सरकारले नयाँ प्रविधिको सवारी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रदेशकै नाम राखेको छ । सोमबारबाट प्रदेशकै संरचनाअनुसार सवारीमा नयाँ प्रविधिको इम्बोस्ड प्लेट वितरण गर्न प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले कात्तिक २० गतेबाट इम्बोस्ड प्लेटका लागि स्वेच्छिक अनलाइन आवेदन खुला गर्न लागेको छ । मन्त्रिपरिषदले अञ्चलका आधारमा प्लेट वितरण गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै प्रदेशका आधारमा इम्बोस्ड प्लेटको वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैअनुसार सोमबारबाट एकान्तकुनास्थित साना ठूला सवारी कार्यालयमार्फत इम्बोस्डको प्लेटको वितरण सवारीका लागि खुला गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले बताए । अब वितरण हुन लागेको इम्बोस्डमा वागमतीको ठाउँमा स्टेट–३ उल्लेख गरिनेछ । अन्य ठाउँमा वितरण थाल्दा पनि सम्बन्धित प्रदेशकै पहिचान नम्बर राखिने भएको छ ।
कसरी दिने इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन ?
पहिलो चरणमा तीन पांग्रे तथा चार पांग्रे साना तथा ठूला सवारी धनीले मात्रै इम्बोस्ड प्लेटका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन भुर्नअघि सवारीका बाँकी करहरु सबै तिर्नुपर्नेछ भने तोकिएको शुल्क बुझाएर रसिद लिनुपर्नेछ । टेम्पो लगायतका तीन पांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न २ हजार ९ रुपैयाँ राजस्व लाग्छ ।
यसैगरी कार, जीप, भ्यान तथा ट्रयाक्टर लगायत चारपांग्रेले ३ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । शुल्क बुझाएको रसिद नम्बरसहित आफ्नो गाडीका सबै विवरण अनलाइनमा भरेर इम्बोस्डका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौंमा लागु गरिएपछि विभागले सबै सवारीका लागि अनिवार्य हुने गरी इम्बोस्ड प्लेटलाई बाध्यात्मक गर्ने बताएको छ ।
प्रदेशको नाम पछि टाँस्न मिल्ने
अब मन्त्रिपरिषद्ले नियमालीमा संशोधन गरेकाले वितरण थाल्न लागिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । सरकारले भदौको पहिलो साताबाट इम्बोस्ड प्लेटको वितरण थालेको थियो । सरकारीलाई अनिवार्य गर्दै वागमती अञ्चलबाट निजीलाई स्वेच्छिक रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, देश संघीयतामा गइसक्दा पनि इम्बोस्ड प्लेटमा अञ्चल उल्लेख भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । यसले आम नागरिकलाई दोहोरो आर्थिक भार पर्ने अवस्था आएको थियो । विभागले अञ्चल उल्लेखित प्लेट १२ वटा सवारीमा जोडिसकिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले काम थालेपछि अञ्चलको नाम प्लेट बाट हटाउने निर्णय हुने भएकाले उपभोक्तालाई आर्थिक भार थोपरिने अवस्था अब हट्ने भएको छ ।